ကားများ ရောင်းရန်ရှိသည် myanmar - mymyancar
အားလုံး အသစ် အသုံးပြုခံ့ သွင်းကုန်
ကား စက်ဘီး ထရပ်ကား
အားလုံး လက်စွဲစာအုပ် အလိုအလျောက်
အားလုံး Diesel Petrol Gas
27 တိုင်း Myanmar အတွင်းရောင်းရန်ယာဉ်များ
နောက်ဆုံးပေါ်ပထမ အသက်အကြီးဆုံးပထမ ဦး ဆုံး မိုင်အကွာအဝေး
လွန်ခဲ့သော about 1 month တင်ခဲ့သည်
လွန်ခဲ့သော about2months တင်ခဲ့သည်
လွန်ခဲ့သော3months တင်ခဲ့သည်
Lexus LX570 - 2008 - Face lifted to 2020, in very good condition. Height Control, Radar, Power seats, Power Windows, Low4wheel, Differential lock. etc. + 66 80 431 7772 Car is available in Klang9Free Zone, Mae Sot, Tak, Thailand next to Myawaddy.
လွန်ခဲ့သော5months တင်ခဲ့သည်
၂၀၂၁ မော်ဒယ်လ်၊ ကားသည်ဒူဘိုင်းတွင်တည်ရှိပြီးစျေးနှုန်းများသည်ကုန်ကျစရိတ်ကိုရန်ကုန်သို့ပေးသည်။ ၁၁၈,၈၅၀ အမေရိကန်ဒေါ်လာ - CNF ရန်ကုန်၊ ရရှိနိုင်သောအစုရှယ်ယာများ - ၁ ယူနစ်အဖြူနှင့် ၁ ယူနစ်အနက်ရောင်။2021 MODEL , VEHICLE IS IN DUBAI , PRICE INCLUDED FREIGHT CHARGES TO YANGON. 118,850 US$ - CNF YANGON, STOCKS AVAILABLE - 1 UNIT WHITE AND 1 UNIT BLACK.
လွန်ခဲ့သော 8 months တင်ခဲ့သည်
BRAND NEW VEHICLE , PRICE INCLUDE SHIPMENT TO YANGON , 84,750 US$ - CNF YANGON
VEHICLE IS 2021 MODEL , 1 X BLACK & 1 X SILVER. PLEASE CONTACT ME FOR DETAILS +971 56 219 1848 (whatsapp also available)
လွန်ခဲ့သော9months တင်ခဲ့သည်
လွန်ခဲ့သော 10 months တင်ခဲ့သည်
နောက်သို့ 12နောက်တစ်ခု
Myanmar% MyMyanCar နှင့် Lexus စျေးနှုန်းများ။
% သို့မဟုတ် ကားများ Myanmar ရှိ MMK 1500000 မှကား MMK 1500000 မှသင်ရောင်းသူနှင့်ဒေသတွင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပါ။ Lexus သည် Myanmar တွင်ရောင်းရန်အကျော်ကြားဆုံးကားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတည်ပြုပြီးသောကုန်သည်များ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကားရောင်းဝယ်သူများနှင့်လွတ်လပ်သောဒေသခံရောင်းသူများထံမှ MyMyanCar နှင့်အတူသင်၏နောက် အမှတ်တံဆိပ် ကားကိုအကောင်းဆုံးရရှိနိုင်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်ရယူပါ။
လူမှုကွန်ယက်များနှင့် feeds များ
Facebook, YouTube နှင့် Twitter တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
E-Mail သို့မဟုတ် SMS သတိပေးချက်များအတွက်
2016-2021 အားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ MyMyanCar.com သည် ။